modx cms - MYSTERY ZILLION
September 2009 edited February 2011 in CMS
is anyone use this cms???
if use .. pls reply me ..
because i use this cms for my requirement and i haveaproblem in price enquiry form
Zack ရဲ့ သဒ္ဒါဖြု.net မှာ ညွန်းထားတဲ့ ဟာပါ?
ကျွန်တော့ favourite MODX ကြီးပါနေတယ်ခင်ဗျ
အခု MODX ကိုတော်တော် သုံးတတ်သွားပြီ တော်တော်ကောင်းပါတယ် CMS Made simple နဲ့ သဘောတရားချင်းတူတယ် .. MODX ကို VOTE ပေးကြပါခင်ဗျာ
silverstripe လည်းသုံးလို့ကောင်းတယ်။ ခက်တာက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက ဆင်ရုံပဲ ဆင်ပြီး customize လုပ်ရတာကတော့ သိပ်မဆင်တော့ဘူး သာမန် user တွေအတွက်ကတော့ MODx လည်း မဆိုးဘူးဗျ။ admin panel လည်းက တောှတောှလေးကို user friendly ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။
ဗိုလ်စေ Modx ကိုသုံးဖူးလားဗျ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဆိုရင် တစ်ခုမေးမလို့:1:
Been learning MODx for awhile. Thought the learning curve will be deep, but heck no. It's just so damn designer friendly, and even surpassed my favourite TYPOlight and TextPattern, at least to me.
Glad to meetafellow designer from MM using MODx. I am more glad to see somebody breaking out the tradition Joomla-cult.
ကျွန်တောှက wordpress မှ wordpress ပဲ.. အဲဒါပဲ တတ်တယ်.. :P
@saturngod LOL. WP is very powerful platform. Personally I find itabit intimidating for me as to fully tap into the very power WP has to offer, one must know PHP. I am not much ofahardcore developer, even though that much is not necessary to create powerful WP websites.
Yet I don't want to create just another blog templates with nothing new but an aesthetically pleasing design. Perhaps I enjoy what TextPattern and MODx can offer so much that I am being reluctant to get out of my ways to learn WP. Maybe one day...
I'm Drupal Fan..
in our company, designer create HTML page and we change to the Wordpress Desing. We're also doing plug-in for WP. It's not too hard but need to know PHP experience and English Language
modx က တကယ့် အပြင်မှာ သွားတဲ့ web business field အတိုင်းပဲဗျ
ဒီဇို်င်းနာက ကြိုက်သလိုဆွဲထားတဲ့ ဒီဇို်င်းကို css ရေး
ပြီးရင် user ကအမြဲ update လုပ်ချင်တဲ့ နေရာတွေကို tv ဆိုတဲ့ template variable တွေရေး template ထဲမြုပ် ... eg banner , logo , content , title တွေပေါ့ဗျာ ..
အဲဒီလို လိုသလိုလုပ်လို့ရတယ်ဗျ .. လေ့လာကြည့်ပါ အကောင်းအဆိုးတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၀၉ ရဲ့ အကောင်းဆုံး cms စာရင်း၀င်တယ်ဆိုမှတော့ သူ့မှာလဲ ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်
ya... I like ModX but I need to time for learning. I will learn,soon.
modx 1.0.2 nov4ရက်နေ့ကထွက်ပါပြီ .. 1.0.0 နဲ့ ဘာကွာသွားသလဲဆိုတော့ manager panel , နောက် plugin qm, နောက် အသစ်ထွက် module တွေ ထပ်ဆောင်းပေးထားပါတယ် .
ဒီလောက်တောင် ညွှန်းနေတယ်ဆိုတော့ တစ်ရက်လောက်တော့ အချိန်ပေးပြီး စမ်းကြည့်မှပဲ။
ဟီး... ဒီမှာတော့ သိဘူးဗျာ ဒီမှာ က joomla ပဲ crazy ဖြစ်ကြတာကိုး ကျွန်တော်လဲ အတော်များများ သုံးဖူးပါတယ် ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့လဲ နောင်ဂျိန်ချနေကျပဲ သူတို့က page တစ်ခုအတွက် template တစ်ခုဆွဲချင်တဲ့ အခါမျိုုးပေါ့ joomla ကျတော့ သူ့ template က ဖိုင်တစ်ခုထဲလေ left right ရွေ့လို့ရပေမယ့် အားနည်းချက်တြော့ရှိတယ် odx ကျတော့ Page တစ်ခု template တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ် package တွေနဲ့ ချုပ်ပြီးရေးတဲ့အခါ ကျတော့ အသုံး၀င်တယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် joomla လောက် extension မစုံလင်ဖူး တခါတလေခေါင်းအရမ်းစားတယ်
ဒီမှာလို့ ပြောလို့ ကျွန်တော့်ကို ဟိုကလူမထင်ပါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ အမိမြေမှာ မီးပျက်တဲ့ ကြားထဲက တ MOdx ထဲ Modx နေတဲ့ ငနဲ ပါ စေတန်ဆို ခဏလေးနဲ့ ရမှာပါ နောက်ဆို MOdx မှာ snippets တွေ ကိုယ်တိုင်၀င်ရေးပေါ့ဗျာ
ဟီး... ဒီမှာတော့ သိဘူးဗျာ ဒီမှာ က joomla ပဲ crazy ဖြစ်ကြတာကိုး ကျွန်တော်လဲ အတော်များများ သုံးဖူးပါတယ် ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့လဲ နောင်ဂျိန်ချနေကျပဲ သူတို့က page တစ်ခုအတွက် template တစ်ခုဆွဲချင်တဲ့ အခါမျိုုးပေါ့ joomla ကျတော့ သူ့ template က ဖိုင်တစ်ခုထဲလေ left right ရွေ့လို့ရပေမယ့် အားနည်းချက်တြော့ရှိတယ် modx ကျတော့ Page တစ်ခု template တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ် package တွေနဲ့ ချုပ်ပြီးရေးတဲ့အခါ ကျတော့ အသုံး၀င်တယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် joomla လောက် extension မစုံလင်ဖူး တခါတလေခေါင်းအရမ်းစားတယ်
modx ဆိုတာကို ဒီမှာ သင်ပေးပါလား ဟီး...ဒါမှမဟုတ်လည်း လေ့လာလို့ ရမယ့်လင့်
ဆရာရေပေးပါဦး လုပ်ပါဦးဗျ စိတ်၀င်စားလာပြီ။။။။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ချ ပြီး local ထဲမှာ စမ်းကြည့် အောင်ခန့် လွယ်လွယ်လေး ဟ တကယ်ပြောတာ
ModX တော့ သိဘူး။ Wordpress ကတော့ plugin ရှာမတွေ့ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် template မှာ ပြင်ချလိုက်တာပဲ။ wordpress ကတော့ PHP တတ်ရင်လွယ်တယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်ချင်လဲ။ အကုန် template ပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်။ plugins ဆိုတာက template ပြောင်းရင် ကျန်ခဲ့အောင် လုပ်ထားတာပါ။ plugins ရေးရတာ နည်းနည်းပိုရှုပ်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် template ထဲကောက်ရေးလိုက်ရင် မြန်တယ်ဗျ။ wordpress က lightweight ပဲ။ admin panel မှာ joomla လို ပုံတွေအများကြီး မသုံးထားဘူး။ ပေါ့ပေါ့လေးပဲ။ ModX ကိုတော့ တစ်ရက်လောက်တော့ စမ်းကြည့်မယ်။ ပြီးရင် ဆက်ဆွေးနွေးပေးမယ်။ Modx နဲ့site တစ်ခု အစအဆုံးလုပ်ကြည့်မှပဲ သိမယ်ထင်တယ်။ Joomla ကိုတော့ ခြေဦးတောင် ပြန်မလှည့်တော့ဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး sqllite နဲ့ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ မသုံး လူမသိတဲ့ habari ရှိတယ်။ အကုန်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်လုပ်ရတာများတယ်။ နောက်ပြီး ပြင်ရအောင်လည်း သူက OOP ဖြစ်နေတော့ OOP နားမလည်ရင် သူ့ code က နားလည်ရခက်ပြန်ကော။ ModX တော့ ဘယ်လိုနေမလဲမသိိဘူး။
ကျွန်တော်အရင် က တွိတွိ ပြောဖူးလို့ cmsimple သုံးဖူးတယ် သူူ့ခေတ်နဲ့သူတော့မိုက်တယ် ပြောရမှာပဲ .. Database မရှိဘူး ဗျာ Good တယ်နော် .. Html ဖိုင်တွေ ရှုပ်ရှပ်ခပ်မနေဘူး ဆိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ data တွေအားလုံးကို index တစ်ဖို်င်ထဲနဲ့ ထိန်းထားတယ် cms ထဲမှာတော့ ခေတ်မရှိတော့ပေမယ့် သူ့ ကို စလေ့လာ ဖူးတော့ နောင် ဘာ cms လာလာ အဲဒါလေ့လာဖူးတော့ အဆင်ပြေတယ်ခေါ်ရမှာပဲ .. wordpress ကို ကျွန်တော် လေ့လာလိုက်အုံးမယ်ဗျာ မေးစရာရှိရင် အသကုန်မေးမှာနော် Thread တစ်ခု ထပ် ဖွင့်အုံးမှပဲ
modx တော့ download ချပြီးပြီ။ site တစ်ခုလောက် စမ်းလုပ်ကြည့်မှ တကယ်တတ်မယ်ထင်တယ်။ လုပ်ဖို့ site တစ်ခုလောက် ရှာလိုက်အုံးမယ်။ အခု စဉ်းစားနေတာက site.ornagai.com လုပ်ပြီး ornagai အတွက် CMS site လေး ကို ModX နဲ့လုပ်မလို့။ တကယ်လို့ လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ မသိတာ ရှိရင် မေးမယ်ဗျာ။ Wordpress ပိုင်းဆိုရင်တော့ လာထားပဲ ဖြေချင်လွန်းလို့.. :P
emo လေး ညွှန်း တာ နဲ့ကျွန်တော်လဲ modx ကို သုံးနေပါတယ်..
လောလောဆယ် တော ့Local မှာဘဲ
//-- ENGLISH LANGUAGE FILE
$_lang['DM_module_title'] = 'Document များအား စီမံခန် ့ခွဲခြင်း';
$_lang['DM_action_title'] = 'Select an action';
$_lang['DM_range_title'] = 'SpecifyaRange of Document IDs';
$_lang['DM_tree_title'] = 'Select Documents from the tree';
$_lang['DM_update_title'] = 'အဆင့်မြှင့် ခြင်း အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး၏';
$_lang['DM_sort_title'] = 'မီနူး ခလုတ် များအား ပြုပြင်ရန်';
အီမို ရေ.. တစ်လက်စ ထဲ Plugin တွေ ဖရီး ရတဲ့ဆိုက်စ် ကို ညွန်းအုံးဟ
modx က သုံးရတာ တော့ တော်တော်လန်းတယ် ပေါ့လဲ ပေါ့တယ်..
joomla နဲ့phpbb နဲ ့ရောပြီး wordpress နဲ ့များ စပ်ကျထားတာ..ဟီးးးးးးး
emo လေး လို့ ပြောတာကို တွိတီ သိရင် ရီလိမ့်မယ် ဗျ . ဟို ကလေးလေး က emorocket .. ကျွန်တော်က ရိုးရိုး emo ကြီးပေါ့ဗျာ .
MODx မှာ ပြသနာက commutinity သေးသေးတယ်ဗျ Joomla နဲ့ ဆို နှိုင်းယှဉ်လို့မရလောက်အောင် commutinity သေးသေးတယ် plugin တွေ Modules တွေ ကိုတော့ modxcms.com ထဲမှာ ရှိပါတယ် muddydogspaws.com မှာလဲ menu နဲ့ပတ်သတ်တာတွေရှိပါတယ် အဆင်ပြေမှာပါ မပြေတော့လဲ နောက်တစ်ခုပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား
plugin တွေ Modules တွေ ကိုတော့ modxcms.com ထဲမှာ ရှိပါတယ် muddydogspaws.com မှာလဲ menu နဲ့ပတ်သတ်တာတွေရှိပါတယ်
Plug in တွေ ကျေးဇူးပါ..
အီမို တွေ ရောသွား လို ့တောင်းပန် ပါတယ်..ကျွန်တော် လဲ မဆင် မခြင် ခေါ်မိတာပါ..
လောလောဆယ် တော ့
ဒါလေး နဲ ့ရောသမ မွှေ လိုက်တာ အယ်ရာ တွေ ကို ပေါင်းစုံေ၇ာ....:D
wow!! ModX က designer happy ပဲဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို တော်တော်လေးအဆင်ပြေမှာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ စျေးကွက်နဲ့တော်တော်လေးကို ကိုက်တယ်ဗျ။ Joomla ထက်စာရင် ModX ကိုပြောင်းသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ModX က လိုသေးတယ်။ သူက client တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကို အပြည့်အဝ မဖြည့်ပေးနိုင်သေးဘူး။ ဥပမာ Theme မှာဆိုရင် screenshoot လေးတောင် မပြထားတော့ theme ပြောင်းဖို့ နာမည်လေးကို ဖတ်ပြီး အကုန် download လိုက်ချနေရတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ရေးဖို့ကလည်း ပျင်းတာလည်းပါတာပေါ့
modx ကိုု learning လုုပ်ချင်လိုု့ e-book လေးတွေ ရှိရင် ဝေမ ျှပါအုုံးဗျာ
You may download at here:
ဟိဟိ ကျွန်တော်လည်း လေ့လာကြည့်ဦးမယ် ဒေါင်းတာတော့ဒေါင်းပြီးသွားပြီ
ဗိုလ်စေ ဟောဒီဆိုက်ကတော့ screen shoot ပြပေးထားတယ်
ကိုယ်ပိုင် themes တွေလဲ modx မှာရေးလို့ရပါတယ် wordpress လိုပါပဲ
modx က ပေါ့တာတော့ ပေါ့တယ်။ user friendly မဖြစ်ဘူးနော်.. theme လည်း ရှားတယ်။ plugin လည်းနည်းသေးတယ်။
user friendly မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်အချက်ကို ကြည့်ပြီး ပြောတာလဲ ဟင် .
ကျွန်တော့် customer တွေဆိုရင် သဘောကျလွန်းလို့ ဗျာ ..
ဟိုတယ် ပိုင်ရှင် ကအစ တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်အဆုံး .. နားလည်ပါတယ် အစ်ကို က ဘာ user friendly မဖြစ်တာတုနး်
theme ဆိုတာက manager panel themes ကို ဆိုလိုတာလား templates ကိုဆိုလိုတာလား ..
template ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာရေးပါတယ်
desinger က ဒီဇိုင်းဆွဲတယ် ကျွန်တော်က html css ရေးတယ် . ပြီးတော့ modx ထဲထည့်တယ် ... သူဘာသာ ကြိုက်တဲ့ desing ဆွဲ အေးဆေးပဲ
ကျွန်တော် modx ကို ကြိုက်တာအဲဒါကြောင့်ပါ ..
plugin ရှားတယ်ဆိုတာကိုလဲ လက်မခံပါ ခင်ဗျာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ plugin မှန်သမျှ modx မှာ ရှိနေလို့ပါပဲ
ဟိုတယ် ပိုင်ရှင် ကအစ တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်အဆုံး .. နားလည်ပါတယ် အစ်ကို က ဘာ user friendly မဖြစ်တာတုနး် :d
ကျွန်တော်က wp သုံးနေကျဆိုတော့ ၀က်ပရက်စ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တာပါ။ နောက်ပြီး အခုမှ စသုံးကြည့်တာဆိုတော့ theme ကိုလည်း ကျွန်တော်က ဒီတိုင်း ရှာကြည့်လို့... :P ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားတဲ့တစ်နေ့တော့ အချိန်ပေးပြီး လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ ဒါနဲ့ ၀က်ပရက်ထက် သာတာတော့ သိပ်မတွေ့သလိုပဲဗျ... သာတဲ့အချက်လေးတွေ နည်းနည်းလောက် မျှေ၀ပေးပါဦး...
Don't compare with wordpress. Wordpress is blog engine and not CMS completely. ModX isaCMS. ModX design for desinger happy. Wordpress is designer for blogger happy. Not the same way. So, don't compare this two
ကျွန်တော်တို့ က package တွေ လုပ်ပြီးရောင်းတာဗျ ဥပမာ ဗျာ Home page မှာ banner တစ်ခုရှိတယ် images ၅ ခု ရှိတယ်ဆိုပါစို့ .. အဲဒါအပြင် တခြား ပုံတွေ ဘာမှတင်လို့မရဘူး အဲဒီလို package မျိုုး ဆိုရင် modx မှာ image field ၆ ခု ဖွင့်လိုက် ရုံပဲ ..နောက်ပြီး user အတွက်ပေးထားတဲ့ cms panel မှာ အဲဒီ image တွေ အတွက် upload field ၆ ခုပေါ်နေရော . သူ တင် ဖို့ အတွက်လဲ လွယ် တယ် ဒီ field မှာ တင် ရင် ဒီပုံပြောင်းသွားမယ်ဆို သူ သိတယ်လေ .. အရမ်းလွယ်တယ် ဗျ စာတွေလဲ ဒီအတိုင်းပဲ .. အဲ ဒီတော့ ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ template ဒီဇိုင်းလဲ ပြောင်းမသွားဘူး ... wordpress မှာ အဲဒီလို အတွက် မရှိဘူး သူ က editor ကြီး တစ်ခု လုံးပေးထားတော့ သူ့ content မှာ user က ကြိုက်သလို ပုံတွေ စာတွေ ဖြည့်လို့ ရနေတယ် လေ . နောက်ပြီး သူက page တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု က template တစ်ခု ထဲပဲ သုံးလို့ရတယ် modx က multi template သုံးလို့ ရတယ် home မှာ တမျိုး နောက် page တွေမှာတမျိုူး အဲဒီလို လုပ်လို့ရတယ် banner တွေဆိုရင်လဲ တစ် page မှာ တစ်ခု လုပ်လို့ရတယ်ဗျာ .. wordpress နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်ပြောတာ သောက်တလွဲဖြစ်တာရှိရင် လဲ ပြောပေးကြပါ ..
နောက်သာတာတချက်က user lever ခွဲတဲ့နေရာမှာ wordpress ထက်သာတယ် .
မသာတာကတော့ community မရှိသလောက်ပဲ ချောက်တိချောက်ချက် လို့တောင်ပြောလို့ရတယ် .. တစ်ခုခုဆို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပေတော့ .. နောက်ပိုင်း ကြီးထွားလာဖို့တော့ရှိတယ်
modx က wordpress ထက်ကောင်းတယ်လို့ မဆိုလိုဘူးနော် ကောင်းတယ်လို့ပြောလာရင်လဲ လက်မခံပါ .. wordpress လဲ ကျွန်တော်သုံးတာပဲ ( အလကားရလို့ ) .. ကောင်းတာပဲ ဗျ .. ဒါပေမယ့် အခုလို Package တွေ ခွဲပြီး ရေးဖို့ ကြုံလာတော့လဲ ပြောင်းလဲရတာပဲလေ
expression engine ဆိုတာလဲ သုံးဖူးတယ် .. ပိုက်ပိုက်ပေးရတယ် .. modx က အဲဒါကို တုထားတာပါ .. သူကတော့ အလကားပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ဆီနဲ့ ရေလိုကွာပါတယ်
အဲဒါဆိုရင် expression engine က တော်တော်ကောင်းမယ်ထင်ရတယ် မဟုတ်ပါ သူကျတော့ user တွေ အတွက် ခက်နေပြန်ရော .. နောက်အားရင် ထပ်ပြောပြပါ့မယ် ခု ဆိုက်တစ်ခု ရေးရအုံးမယ်ဗျို့
wordpress မှာ အဲဒီလို အတွက် မရှိဘူး သူ က editor ကြီး တစ်ခု လုံးပေးထားတော့ သူ့ content မှာ user က ကြိုက်သလို ပုံတွေ စာတွေ ဖြည့်လို့ ရနေတယ် လေ .
That not ture. We can make setting in template page. However, it's advanced level. User can change their home page and many many thing but need to write setting feature for template.
နောက်ပြီး သူက page တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု က template တစ်ခု ထဲပဲ သုံးလို့ရတယ်
Thatawrong thing. But not easy for end user.
That true. Wordpress don't have many user level and we can't create new user level.
joomla မှာ front end user နဲ့ backend user ရှိသလိုပဲ MODx မှာလဲ user နှစ်မျိုးရှိပါတယ်
web user နဲ့ manager user ဆိုပြီးတော့ ရှိပါတယ် .. manager user ကတော့ backend အတွက်ပါ manager user မှာမှ user level ကို အမျုုိးမျိုးခွဲလို့ရပါတယ် Security -> Roles ထဲမှာ သူ့ role level တွေကိုု စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်
နောက် web user ကတော့ frontend က page တွေကို member တွေ အတွက်ချည်းပဲ သီးသန့် ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်တာတွေ ပါ၀င်ပါတယ်
လုပ်ပီးတား တန်းပလိတ် လေးများ ရှိရင် ရှဲ ပေးပါအုံးဗျာ..
ကျွန်တော် လဲ modx ကို ကလိလက်စ မို ့လို့ကူညီနော်..:D
ဟုတ်ဘူး ဗျု ညီနောင် တို့ အထင်လွဲနေကြပြီ ထင် တယ် Modx template ဆိုတာ joomla တို့ wordpress တို့လို ရေးရတာ မခက်ပါဘူး joomla လဲ ရေးဖူးတယ် နည်းနည်း အချိန်ပေးရတာ ကလွဲရင် သူလဲ ရေးရတာကောငး်ပါတယ် wordpress ကတော့ ရေးဖူးဘူး .. ဒါတော့ နောက်မှ ဗိုလ်စေကိုမေးရမယ်
ဒီလိုဗျာ ကျွန်တော်တို့က site တစ်ခုကို html နဲ့ ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုပါတော့
<h2>my header </h2>
<p>my paragraph my paragraph my paragraph my paragraph </p>
အဲဒါကို မှ ကျွန်တော်က Modx နဲ့ ပြန်ရေးရင် လိုအပ်တဲ့ tv . အဲ tv ဆိုတာ template variable ကိုပြောတာပါ . အဲဒါတွေကို အရင်ရေးတယ် ဥပမာဗျာ
[*myimage*][*myheader*][*myparagraph*] အဲဒီသုံးခုကို ရေးလိုက်တယ် အမျိုးအစားကတော့ ကွာမှာပေါ့ ပထမ ဟာက image အမျိုးအစား ဒုတိယ က text တတိယက textarea ..
အဲဒါတွေကို ခုနက html မှာ ဘယ်လို မြုပ်လိုက်သလဲဆိုတော့
အဲဒါဆိုရင် user ကနေ သူ့စိတ်ကြိုက် ပုံတစ်ပုံရယ် စာနှစ်ခုရယ်ကို လုပ်လို့ရသွားပါပြီ
ညီနောင်တို့ ဒီလောက်ဆိုရှင်းပြီထင်ပါရဲ့ လွယ်ပါတယ် ဗျာ
Thz for sharing ... Ko Emo
ကျွန်တော့ဆိုက် ရဲ့ themes က wordpress themes ကို ယူထားတာ. ပြောင်းအားသေးဘူး. ..
အဲဒါကို modx နဲ့ ဘယ်လိုပြောင်းသလဲဆိုတာ အခု username နဲ့ password တစ်ခုပေးမယ် အခုလင့်မှာ ၀င်ပြီး Home page ကို modx နဲ့ ဘယ်လိုရေးသလဲ ဘယ်နေရာကို tv တွေ ဖွဲ့ထားသလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် .. ပြောသာပြောရတာ .. စိတ်၀င်စားကြမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး ..
Password - modxuser
တစ်ခုပြောချင်တာက homepage တစ်ခုထဲကိုပဲ modx ပြောင်းထားတာဆိုတာကိုပဲ
တစ်နေ့ က တပည့် လေး တစ်ယောက်မေးထားတဲ့ ဟာ ပါ .. အခု သူ့ error ကို သိလို့ အားလုံး လဲ သိအောင် ရေးလိုက်ပါတယ် .. သူ က သူ့ စက်ထဲ က ဆာဗာထဲ မှာ CMS တစ်ခု ထိုင်ပြီး modules တွေ plugin တွေ အဲဒါတွေကို တင်ပြီး run တယ် .. အဆင်ပြေတယ် .. အဲ အဲဒါ တွေ ကို သူ့ Hosting ထဲ တင်လိုက်ရင် အဲဒီ modules တွေ က run လို့ မရတော့ ပါဘူး error တက်တယ် ပေါ့ဗျာ .
ကျွန်တော် က PHp version ကြောင့် ထင် လို့ သူ့ ကို hosting php version နဲ့ အဲဒီ တင်တဲ့ module တွေ ရဲ့ version တွေ ကို စစ်ခိုုင်းတယ် . သူ က hosting version ကတောင် ပို်မြင့် တယ် လို့ ပြန်ဖြေတယ် .. အမှန် က သူ က hosting php version ကို ပဲ ကြည့် တာပါ . သူ့ hosting က သူ့ အကောင့် ရဲ့ php version ကို မကြည့် ပါဘူး . share hosting သုံးတဲ့ သူများ သတိပြုဖွယ်ပါ ..
ကိုယ့် အကောင့် ရဲ့ PHp version ကို အမြဲ Update လုပ်ဖို့ပါ .. ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ကတော့ hosting တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု မတူ နိုင်ပေမယ့် .. အနီးစပ်ဆုံး ကတော့ . PHP Icon ပုံလေးကို Click နှိပ် ပြီး အဲဒီမှာ Update လုပ်လိုက်ဖို့ ပါပဲ ..
modx မှာ ကောင်းတာက က pages တွေကို cacheable လုပ်လို့ ရတာပါပဲ .. ..
ဥပမာ ကျွန်တော် က home page ကို cacheable လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက် က WEB site ကို ကြည့် တဲ့ အခါ Mysql ထဲကို သွားမဖတ်တော့ ပဲ နဲ့ သူ့ cache folder ထဲ က cache static html ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် .. အဲဒီ တော့ Modx ကို သုံး ရင် ဆိုက်တက်တာမြန်ပါတယ် .. . .
နောက်လုပ်လို့ ရတာ က .. pages တွေ ကို attachment pages တွေ အဖြစ်ပြောင်းလို့ ရတာပါပဲ ..
ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ . ဥပမာ .. Profile page ကို web page အဖြစ်မထားပဲ . download attachment အဖြစ်ပြောင်းချင်ရင် . site Content-Disposition ကို attachment အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ .. နောက် xml, rss, pdf ,word ,excel . စတာတွေလဲ ပြောင်းလို့ရပါတယ်
Modx မှာ wordpress လို blog တွေ ရေးလို့ ရပါတယ် . comment တွေ လအလိုက် archives တွေ document tags တွေ က အစ ခွဲထားလို့ ရပါတယ် ..
ဖြတ်ပြောရရင် အခု လို ပြောနေတာ ရေးနေတာ တွေ က modx ကောင်းကြောင်း တဖွဖွ ညွန်း နေတာ မဟုတ်ပါဘူး .. modx ကို အားလုံး ပြောင်းသုံးအောင် တခြား cms တွေ ထက်သာ ကြောင်းပြောနေတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး .. တချို့ က modx က ခက်တယ် ပြော လွန်းလို့ ပါ . ဟုတ်လဲ ဟုတ်ပါတယ် သူ က ပြင်ရေးရတာတွေ များပါတယ် .. သာမန် vote plugins လေး တစ်ခုက ဘယ် cms မှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ ထည့်လို့ ရပါတယ် php , html , css ဘာမှ မသိတောင် ရပါတယ် .
modx မှာတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး . လက်၀င်ပါတယ် ..
အခု လို Modx အကြောင်းတွေ ရေး ရေးနေရတာ က မြန်မာ ပြည်သား တစုံတယောက် က modx ကို လုပ်ငန်း သဘော အရဖြစ်စေ အကြောင်းတစ်ခု ကြောင့် ဖြစ်စေ အသုံးလို တဲ့ အခါ . အော် modx က ဒီလိုမျိုးတွေ သုံးလို့ ရပါလား ဆိုတာ သိစေချင်လို့ ပါ .
ဟုတ်ကဲ့ ဆက် ရေးရရင် MODX မှာ Blog ကို ထည့်ချင်ရင် သူ့ template မှာ Ditto call တစ်ခု ကို ကြေငြာ လိုက်ရုံပါပဲ ..
[!Ditto? &startID=`2` &tpl=`dittoTpl` ∑marize=`5`!]
အဲဒီ startid နေရာမှာ ကိုယ့် page ရဲ့ id ကို ကြေငြာပေးလိုက်ရုံပါပဲ ..
modx မှာ defautl snippets အဖြစ်ပါလာတဲ့ ditto က တော်တော် အသုံးပြုလို့ ကောင်းပါတယ် . ditto ကို အသုံးပြုပြီး .. shopping cart တစ်ခု ဂျာနယ် တစ်စောင် လုပ်လို့ ရပါတယ် . ကျွန်တော် ဆို အဲဒါ ကို သုံးပြီး shopping cart နှစ်ခု . ဂျာနယ် တစ်စောင် လုပ်ထားပြီး ပါပြီ .. customer တွေ အတွက်လဲ သတင်းတင်ရတာ အင်မတန် အဆင်ပြေပါတယ် .
ကိုကြီး emo ရေ ...
ကျနော် က localhost မှာ စမ်းတာ မရလို့ခင်ဗျ...
အဲဒီလိုကြီးပဲ ပေါ်နေပါတယ် ခင်ဗျ. ... Xampplite ကို သုံးပြီးတော့ စမ်းကြည့်တာပါ ဘာများမှားနေလို့ပါလည်း ခင်ဗျ.. Localhost ကနေပြီးတော့ အွန်လိုင်းHosting ပေါ်ကို တင်တဲ့ အဆင့်ထိ အသေးစိတ် စာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်လောက် ညွှန်းပေးပါလား ခင်ဗျာ...:redface:
နောက်ကျသွားတဲ့ အတွက် ဆောရီး bro.
ModX မှာ Version နှစ်မျိုးရှိတဲ့ အတွက်ပါ .. bro အခု ဒေါင်းပြီး စမ်းတာ . revolution version ၂.၀ ဖြစ်နေလို့ပါ .
အဲဒါဆိုရင်တော့ .. http://localhost/foldername/setup လို့ ရိုက်လိုက်ပါ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
တစ်ခု ရှိတာက revolution version က . offline အဆင်မပြေ သေးပါဘူး.. သူ က plugin တွေ ဒေါင်းတဲ့ အခါ . Online ဆာဗာ ဆီ သွားသွား ဒေါင်းနေလို့ . လောလောဆယ် tinymce ( text editor ) တောင် သုံးလို့ မရသေးပါ ..
နောက် version တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ evolution ကို ဒေါင်းပါ bro . အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် .
1.0.4 version ဖြစ်ပါတယ် . အသင့် plugin, snippets တွေ ပါပြီး သားပါ ..
အများအားဖြင့် russian တွေကို ခပ်ကြောင်ကြောင်ကောင်တွေလို့ ကျွန်တော် တို့ထင်တတ်ကြပါတယ် ချယ်ဆီးသူဌေးကို ကြည့်ပြီး အူကြောင်ကြောင်မျက်နှာနဲ့ကောင်လို့ ကျွန်တော် လဲ ထင်မိပါတယ် .. မျက်နှာပေါက်တွေ ကလဲ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ . အများအားဖြင့် russian တွေ က လူဆိုး နေရာက သရုပ်ဆောင် ကြရလို့ ဗလ အားကိုးနဲ့ ခပ်တုံးတုံး ကောင်တွေလို့ လဲ အထင်မှားတတ်ကြပါတယ်. အံမယ် အခု MODX snippets တွေ အတော်များများကို လေ့လာမှ အတော်များများကို russian တွေ ပတ်သတ်နေတာတွေ့ရပါတယ် . သူတို့ ဆီ က small shop တွေ အတော်များများ ဟာလဲ modx shopping cart ကို သုံးထားပါတာတွေ့ရပါတယ် . အဲဒါကို လဲ russian တွေပဲရေးတာပါ .. ဒါ့ကြောင့် .. တခြား cms တွေ တခြား it field တွေ မှာ russian တွေ ပတ်သတ်သမျှကိုလဲ ရေးပေးကြပါအုံးလို့ ပြောချင်ပါတယ်
ဒါကို ဘယ်အောက်မှာ ၀င်ရေးရမှန်း မသိလို့ MODx အောက်မှာပဲ ၀င်ရေးလိုက်ပါတယ် . ပြန်ရွေ့ ရင်လဲ ရွေ့ ပေါ့ဗျာ
ဒီလို ဗျာ ကျွန်တော် အစာအိမ် တော်တော် ပြသနာဖြစ်နေတယ် ည အရမး် နက် တဲ့ အထိ အလုပ်လုပ် တယ် နှစ်နာရီ ကျော်မှ နည်းနည်း အိပ်ချင်စိတ်ပေါ်တယ် . မနက်ကို နေမြင့်မှ ထတယ် . အဲဒီ မှာ မနက် နိုးတာနဲ့ ကော်ဖီ တခွက်သောက်ပြီး . အလုပ်လုပ်တာ နေ့လည်တစ်နာရီ မှ ထမင်းစားတယ် အဲဒါလဲ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာပါပဲ . တီဗီကြည့်ရင်းပေါ့ဗျာ .. အဲဒီ မှာ အစာအိမ်စ အောင့် တော့ တာပါပဲ အဲဒီတော့ ခရေးမေးလ်အက်စ်လေး သောက်ပြီး ပြန် အလုပ်လုပ်ပေါ့ . မကြာပါဘူး ဟိုတစ်နေ့ ကမှ . အစာအိမ်အောင့် လို့ သွားအန်လိုက်တာ သွေးတွေပါလာလို့ တော်တော်လန့်သွားတယ် .. မပေါ့ကြနဲ့ ဗျာ ကျွန်တော့်လို ဖြစ်မှာစိုးလို့ ပြောတာပါ . အစာမခံကြနဲ့ . စားစရာရှိတာသာစားပြီး အလုပ်လုပ်ကြလို့ ပြောချင်ပါတယ် . နောက် ဒီ forum မှာ emo ကြီး မရေးတော့တာတွေ့ရင် သေပြီလို့သာ မှတ်ကြပေတော့ .. လောလောဆယ် မင်္ဂလာရွေအုပ်သောက်ပြီး အနားယူနေရတယ် . ဆေးခန်းက ဆရာမလေးက ညွန်လိုက်တာ ရယ်ရတယ် . သူလဲ အဲဒါနဲ့ ပျောက်တာဆိုပဲ . အင်္ဂလိပ်ဆေး တော့ သိပ်မပေးလိုက်ဘူး . ဟီးဟီး
Russian တိုင်းကို အူကြောင်ကြောင်မျက်နှာနဲ့လို့မပြောပါနဲ့ ကို emo ရယ်.
ခွိ... အဲ့လို အူကြောင်ကြောင်မျက်နှာတွေက ယောက်ျားလေးတွေမှာသာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ... Sharapova ကတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်... ဟီးး
ဒါနဲ့ .. အဲ့ဒီ Modx CMS အကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ PDF တွေဘာတွေရှိရင် နည်းနည်းလောက်မစပါအုံး ... Offline စမ်းသုံးလို့ရတယ်မဟုတ်လား?
Link : http://tunlwin.com/index.php
Password : <script>alert("happy")</script>
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အပျော်သက်သက်ပါ . သက်ဆိုင်သူများလဲ အချိန်မှီ ပြန်ပြင်နိုင်မယ် လို့ ထင်ပါတယ် ..
အဲဒီ ဆိုက် ရဲ့ user registeration က တော်တော် အခြေအနေ ဆိုးနေပါတယ် . sql injection တစ်ခုခု နဲ့ သာဆို မလွယ်ဘူး ဆိုပြီး google မှာ ရှာကြည့်လိုက်တော့ ဟောဒီလို တွေ့ရပါတယ် . သူတို့ က ကျွန်တော့ ထက် လက်ဦးနေတာကိုး .
လောလောဆယ် မြန်မာ ပြည်မှာ ဟော့ နေတယ် ခေါ်ရမယ့် ဆိုက်တစ်ခု အနေနဲ့ အခု လိုဖြစ်နေတာကို အချိန်မှီ ပြင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ် .
အခု သုံးထားတဲ့ [email protected] ဆိုတာ ဆိုင်က တွေ့ တဲ့ ဟာကို ကောက်သုံးပြီး user စမ်းဖွဲ့ထားတာပါ . ကြားထဲ ကနေ အဲဒီလူ ပြသနာ တက်မှာစိုးလို့ ပါ ဟဲဟဲ .
ဘတ်စ်ကားလက်မှတ် တွေကို အွန်လိုင်း ကနေ မှာလို့ ရပြီ ဆိုလို့ ကိုယ်က လဲ အားကျမခံ modx နဲ့ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ် . သာမန် ၀ယ်တဲ့ enquiry form တင်မကပဲ နောက်ထပ် ကွန့်ချင်တာက ဘတ်စ်ကား ခုံနံပါတ် တွေကို ပုံတစ်ခု နဲ့ပြထားပြီး ၀ယ်ပြီး တဲ့ ဟာကို admin panel ကနေ check box တစ်ခု on ထားတာနဲ့ ၀င်ကြည့် သူ တွေ ကို အဲဒီနေရာမှာ ခုံနေရာလေးကို အမှားလေး ပြထားချင်တာ .
ကိုယ့် customer သုံးရတင်ရတာလဲ လွယ်အောင် အရင် စဉ်းစားပြီး ရေးမယ် ဆိုတော့ လက်ပို၀င်တယ် . ခုံ စုစုပေါင်း နှစ်ဆယ် check box နှစ်ဆယ်ကို သူ က ရုံးကနေထိန်းပြီး ထိုင် ပြီး လုပ်နေရုံပဲ .
မဆိုး ဘူး ဗျ . အဲဒီ ကနေတဆင့် hotel reservation ကို အခန်းတွေကို ပုံတွေ နဲ့ ပြပြီး လုပ်လို့ ရတယ် နောက် တိုက်ခန်း တွေကို လဲ အဲဒီလို လုပ်လို့ ရတယ် . :cool:
ကျွန်တော်လဲ wordpress ပါပဲ ဒါပေမယ့် ဟိုတလောက လူတစ်ယောက် လာပြီးတော့ Modx ဆိုလို ့စမ်းကြည့်သေးတယ်
ကံမကောင်းတော့ မရဘူးဗျ ကျွန်တော်က ဖရီးဟိုစ့်သမားကိုး